Posted by ဖက်တီးလေး at 10:50 PM
သုံးမိုးမက ကျော်လွန်သွား.. လတ်ဆတ်ဆဲ ဒဏ်ရာများ...
Labels: အမှတ်တရ နေ့စွဲလေးများ...
Google Home Page မှာ Background Image လေးတွေ ထည့်ချင်ရင်...
Posted by ဖက်တီးလေး at 10:19 AM
ဒီနေ့ Google Home Page မှာ Background image change လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကို အမှတ်တမဲ့ သတိထားမိသွားလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို share လိုက်တယ်နော်...
စိတ်ဝင်စားရင် ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်လိုက်နော်...
ဒါက http://www.google.com ရဲ့ ပုံမှန်မြင်နေကျ HomePage လေ...
အဲဒီ Page ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေနားက Change Background Image ဆိုတာလေးကို click ပြီး ကိုယ် change ချင်တဲ့ image ကို ရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ...
အဲဒါဆို ဒီလိုလေး ပြောင်းသွားတာကို မြင်ရမှာပါ...
နဂိုမူလ Clear Screen ကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Remove Background Image ကို click ပေးလိုက်ရုံပါပဲ...
Labels: Gmail/Gtalk ကနေ...
Move or Delte application icons on iPhone
Posted by ဖက်တီးလေး at 5:17 PM
iPhone မှာ application တွေကို install လုပ်ချင်ရင် iTunes ကနေ တဆင့် sync လုပ်ပြီး install လုပ်ရတယ်ဆိုတာတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ...
တကယ်လို့များ Phone ကို JailBreak လုပ်မထားဘူးဆိုရင် ဓာတ်ပုံထည့်တာ.. သီချင်းထည့်တာ.. application ထည့်တာ.. ဘာပဲလုပ်ချင်.. လုပ်ချင် iTunes ကနေတဆင့်ပဲ လုပ်ရပါတယ်..
JailBreak လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ တခြား 3rd Party application တစ်ခုခုကနေလဲ iPhone ကို access လုပ်လို့ရပါတယ်..
(ကိုယ့် ဖုန်းကတော့ JailBreak လုပ်မထားပါဘူး..)
မြန်မာစာလေးတွေမြင်ချင်လို့ zawgyi ကို install လုပ်ချင်ပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိ JailBreak လုပ်မထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ install လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကို မတွေ့သေးပါဘူး...
အဲဒါကြောင့် မြန်မာလိုလဲ မမြင်ရပါဘူး...
လောလောဆယ်တော့ မြန်မာစာမမြင်ရတာလေးကလွဲပြီး တခြားဟာတွေသုံးနေရတာ အဆင်ပြေနေသေးတာကြောင့် JailBreak လုပ်ဖို့ကို စဉ်းစားနေတုန်းပါပဲ..
အခု ဒီပို့စ်လေးက iTunes ကနေတဆင့် install လုပ်ထားတဲ့ application icon လေးတွေကို နေရာရွှေ့ချင်ရင်..ဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါ..
computer ရဲ့ iTunes မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် နေရာရွှေ့.. ဖျက်ပြီးမှ sync လုပ်လိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်..
ဒါမှမဟုတ် computer နဲ့မချိတ်ဆက်ပဲ Phone Screen မှာပဲ တိုက်ရိုက်လုပ်လို့လဲရပါတယ်..
application icon လေးတွေအပေါ်မှာ ၂-စက္ကန့်လောက် လက်ကလေးနဲ့ ထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် icon လေးတွေအားလုံး တုန်ခါလာတာကို မြင်ရမှာပါ..
အဲဒီအချိန် ကိုယ် install လုပ်ထားတဲ့ icon လေးတွေရဲ့ အပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်လေး မြင်ရမှာပါ..
(system icon တွေကတော့ ဖျက်လို့မရလို့ သူတို့အပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး..)
အဲဒီလိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့ icon ရဲ့အပေါ်က ကြက်ခြေခတ်လို့ နှိပ်လိုက်ပါ..
delete လုပ်မှာလားဆိုတဲ့ confirmation message ကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
တကယ်ဖျက်မယ်ဆိုရင် Yes ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပြီး မဖျက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ No ပေါ့..
နေရာရွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ icon လေးကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကို လက်ကလေးနဲ့ ဆွဲရွှေ့သွားရုံပါပဲ...
page တစ်ခုကနေ နောက် page တစ်ခုထိရွှေ့သွားလို့ရပါတယ်..
အားလုံးပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ Home button လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် icon လေးတွေတုန်ခါနေတာတွေပျောက်သွားပြီး မူလ screen ကို ပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
iPhone Screen Caputre
Posted by ဖက်တီးလေး at 3:00 PM
iPhone မှာ computer မှာသုံးလို့ရတဲ့ print screen function လိုမျိုး screen ကို capture လုပ်လို့ရပါတယ်..
Phone screen မှာ လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ ပုံလေးတွေ စာလေးတွေကို သိမ်းထားချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်...
screen capture လုပ်ချင်တဲ့အခါ sleep/wake button နဲ့ home button ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း (တပြိုင်တည်း) တွဲနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..
အဲဒီအချိန်မှာ screen မှာ ဖြတ်ကနဲ အဖြူရောင်တစ်ခုကို မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး capture လုပ်လိုက်တဲ့ပုံကိုတော့ photo album ရဲ့ camera roll ထဲမှာ သိမ်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်..
အားလုံးပဲ အစစအရာရာ အဆင်ပြေကြပါစေလို့...
Posted by ဖက်တီးလေး at 6:26 PM
အခုပြောချင်တာက iPhone 3GS HeadPhone လေးအကြောင်းပါ..
iPhone 3G နဲ့ 3GS မှာ ကွာခြားချက်လေးတွေ နဲနဲရှိပါတယ်…
ဥပမာ.. 3GS မှာ Voice Control တို့ Video Recording တို့ ပါလာတာမျိုးပေါ့…
အဲဒီ Voice Control အတွက် 3GS ရဲ့ HeadPhone မှာ ပုံမှာမြင်ရသလို Voice Control button လေးပါပါတယ်…
( iPhone 3G တွေမှာ မပါပါဘူး)
အစကတော့ အဲဒီ HeadPhone လေးကို သီချင်းနားထောင်ရင်တပ်ထားပြီး အသံ အတိုး/အလျော့လောက်သာ လုပ်နေတာ..
အဲဒီ Voice Control button လေးရဲ့ အလယ်က အချိုင့်လေးကို နှိပ်ကို မကြည့်မိတာ..
သီချင်းဖွင့်ချင်/ ပိတ်ချင်/ ရပ်ချင်/ ကျော်ချင်.. ဘာလုပ်ချင်ချင် ဖုန်းကို ထုတ်ပြီး screen ကို tap လုပ်လုပ်ပြီးပဲ သုံးနေမိတာ…
နောက်တော့ ချမ်းရအေးရတဲ့အထဲ ခဏခဏ လက်အိတ်ကို ချွတ်ရစွပ်ရ လုပ်နေရတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီး ရှာကြည့်လိုက်မှ အဲဒီ button လေးကိုသုံးပြီး တော်တော်များများလုပ်လို့ရတာကို သွားတွေ့တယ်..
အခုဆို တော်ရုံတန်ရုံ ဖုန်းကို ထုတ်စရာကို မလိုတော့ဘူး…
အဲဒီ button လေးမှာ ပါတဲ့ + နဲ့ - ကတော့ အသံအတိုး/ အလျော့ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး..
အလယ်က အချိုင့်လေးနေရာကတော့ အခုလိုမျိုးလေးတွေ သုံးလို့ရပါတယ်နော်..
- ၁-ချက်ဖိလိုက်ရင် iPod ထဲကသီချင်းကို Play လုပ်ပေးပါတယ်..
- နောက် ၁-ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Pause ပေါ့…
( ၁ချက် = Play/Pause )
- ၂-ချက် ဆက်တိုက်လေးဖိပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သီချင်းကျော်ဖို့ ( Next >>)
- ၃-ချက် ဆက်တိုက်လေးဖိပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့သီချင်းကို ပြန်သွားတဲ့ (Previous <<)ပေါ့… အဲဒါလေးတွေက iPod က သီချင်းနားထောင်ဖို့ အတွက်ပါ..
တကယ်လို့များ သီချင်းနားထောင်နေတုန်း ဖုန်း call ၀င်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ button လေးကိုပဲ သုံးပြီး phone answer လုပ်လို့ရပါသေးတယ်..
သီချင်းနားထောင်နေတုန်း ဖုန်းဝင်လာခဲ့ရင် အဲဒီနေရာလေးကို
- ၁-ချက်ဖိလိုက်ပြီး Phone call ကို လက်ခံလို့ရပါတယ်..
- ဖုန်းပြောလို့ပြီးသွားလို့ နောက်ထပ် ၁-ချက် ပြန်နှိပ်လိုက်ရင် call end လုပ်ပေးပြီး သီချင်းပြန်နားထောင်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
- တကယ်လို့ ဖုန်းကို လက်မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ နဲနဲခပ်ကြာကြာလေး (၂-စက္ကန့်လောက်) ဖိပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
(ဖုန်း call ကို cancel လုပ်လိုက်တဲ့ အသံတစ်ခု ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..)
တကယ်လို့ ဖုန်းလက်ခံစကားပြောနေချိန်မှာပဲ နောက်ထပ် second call ၀င်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့..
- ၁-ချက်နှိပ်တာဟာ first call ကနေ second call ကို switch လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး.. နောက်ထပ် ၁-ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ first call ကို ပြန်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
- တကယ်လို့ first call ကို လုံးဝရပ်ပြီး second call ကိုပဲ လက်ခံစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ first call ကို call end လုပ်ဖို့အတွက် ခုနကလိုပဲ ၂-စက္ကန့်လောက် ကြာကြာလေးဖိထားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
နောက်ထပ် သုံးလို့ရတာလေးတွေ ရှိသေးလားတော့ မသိဘူးနော်..
သိသလောက်ကလေး share လုပ်လိုက်တာပါ…
iPhone Screen Size Enlarged Problem
Posted by ဖက်တီးလေး at 3:38 PM
ဟိုတစ်လောက ဒီမှာ iPhone ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်တုန်း စပ်စပ်ဆော့ဆော့နဲ့ ဖုန်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်..
(အမှန်က ဒီမှာ ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာတွေက ဟိုလိုပြောလိုက်..ဒီလိုပြောလိုက်နဲ့ အမြဲလိုလို ရှိနေတတ်တာပါ…)
ဒီမှာက ဖုန်းဝယ်ရင် ၀ယ်ဝယ်ချင်း ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး..
အဲလိုနဲ့ပဲ.. iPhone ကို သီချင်းနားထောင်ဖို့ရယ်.. ဂိမ်းဆော့ဖို့ရယ်.. Dictionary ကြည့်ဖို့အတွက် သုံးဖို့ရယ်.. တခြား Application လေးတွေ သုံးကြည့်ချင်တာရယ်.. နောက်ပြီး စစချင်း ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမပေးရပဲ ဖုန်းတစ်လုံးရတာရယ်.. ဘာရယ်ညာရယ်နဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီး ၀ယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်…
၀ယ်ပြီးတော့လည်း Manual ဖတ်ဖို့ကို စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး..
ဒီလိုပဲ ဟိုလျှောက်လုပ် ဒီလျှောက်လုပ်နဲ့ ပြသနာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှသာ googling လုပ်ပြီး ဖြေရှင်းရတော့တာပဲ..
ဒီ iPhone Diary ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးအောက်မှာ ကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေးတွေကို အားလုံးနဲ့ မျှဝေပေးသွားမှာပါ..
တစ်ချို့ကိစ္စလေးတွေက တော်တော်များများအတွက် အရမ်းကို လွယ်ကူပြီး စာမဖွဲ့လောက်တာလေးတွေလဲ ပါနေနိုင်ပါတယ်..
ပထမဆုံး ကိုယ်စပြီး ဒုက္ခရောက်တာကတော့ Screen Size Enlarge ဖြစ်တာပါပဲ..
ကိုယ်က ဖုန်းကို အကျီ င်္အိတ်ကပ်ထဲထည့်ထည့်ထားတတ်တာ..
တစ်နေ့တော့ လမ်းမှာ အရေးတကြီး ဖုန်းသုံးမယ်ဆိုပြီး ထုတ်လိုက်တော့ Icon တွေက အကြီးကြီးတွေဖြစ်နေပါရော..
iPhone ဖုန်းနဲ့ကလဲ သိပ်ပြီး အကျွမ်းတ၀င်မရှိသေးတော့ကာ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်ရတာက ဘယ်လိုမှကို အဆင်မပြေတော့ဘူး..
ဒါနဲ့ ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်.. restart ပြန်လုပ်.. ဘာလုပ်လုပ်ကို မရပါဘူး..
နောက်ဆုံးတော့ Internet မှာ googling လုပ်လိုက်တော့မှပဲ.. အဖြေကိုတွေ့တော့တယ်..
Screen size ကို ချုံ့/ချဲ့ချင်ရင် လက် ၃-ချောင်းနဲ့ ၂-ချက် ခပ်မြန်မြန်ထောက်ပါတဲ့…
Double-tap with three fingers ပေါ့…
ဖုန်းကို အိတ်ထဲက ထုတ်လိုက်တုန်းက လက် ၃-ချောင်းနဲ့ ဖိမိသလိုဖြစ်သွားပုံရပါတယ်..
အဖြေကိုသိသွားတော့သာ လွယ်လွယ်လေး.. ဖြစ်တုန်းကတော့ တော်တော်စိတ်ရှုပ်သွားခဲ့တာ…
အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေး ဖြစ်ပါစေနော်…
Posted by ဖက်တီးလေး at 2:41 PM
အခုပြောပြချင်တာလေးက pdf ဖိုင်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖတ်စရာမလိုပဲ သူများဖတ်ပြတာကို အလွယ်တကူ နားထောင်နိုင်တဲ့ Read out Loud ဆိုတဲ့ feature လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်…
အဲဒီအတွက် လိုအပ်ချက်လေးတွေကတော့ pdf ဖိုင်တစ်ခုခုရယ်.. နောက်ပြီး အဲဒီ pdf ဖိုင်ကိုဖွင့်လို့ရမယ့် Adobe Reader/ Acrobat Professional တစ်မျိုးမျိုးရယ်.. နောက်ပြီး အသံကြားနိုင်စေဖို့အတွက် ear phone ဒါမှမဟုတ် Laptop တွေမှာဆို built-in Speaker ရှိရင်လဲရပါတယ်…
( Adobe Reader က Free download လုပ်လို့ရပါတယ်…)
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ pdf ဖိုင်တွေကိုတော့ မဖတ်နိုင်သေးပါဘူးနော်..
English လို ရေးထားတဲ့ pdf ဖိုင်လေးတွေကို နားထောင်တာတော့ သိပ်မဆိုးဘူးပြောရမယ်..
English အသံထွက်လေးတွေကိုလဲ လေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့..
နောက်ပြီး အဲဒီ feature လေးက Acrobat Professional မှမဟုတ်ပါဘူး.. ရိုးရိုး Adobe Reader မှာလဲရတာမို့
စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖတ်ချင်တဲ့ pdf ဖိုင်တစ်ခုခုကို ပထမဆုံး ဖွင့်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း View Menu ရဲ့ အောက်ဆုံးက Read out Loud ကို click ပြီး activate Read Out Loud ကို click လိုက်ပါ..
Page ရဲ့အောက်နားလောက်မှာ status bar လေးတစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး ခဏလေးနေရင် ခုနက View Menu ကိုပဲ နောက်တစ်ခါ click လုပ်ပြီး ပုံမှာပြထားသလို Read This Page Only/ Read To End Of Document မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ option တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ…
အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အသံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အဲဒီစာကို ဖတ်နေတာကို ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Pause လုပ်ချင်ရင်.. Stop လုပ်ချင်ရင်.. ဒါမှမဟုတ် မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင် View Menu အောက်က Pause/ Stop/ Deactivate Read Out Loud ကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲနော်..
Labels: freewareလေးတွေ သုံးရအောင်
၂၀၁၀ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန်
Posted by ဖက်တီးလေး at 5:04 PM
ဒီနှစ် ၂၀၁၀ အတွက် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန်လေးကို suuchitthu.blogspot.com မှတဆင့်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
မနှစ်ကလဲ “စုချစ်သူ” ဘလော့ဂ်ကပဲ ကူးယူပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှခဲ့ဖူးပါတယ်...
အဲဒီပြက္ခဒိန်လေးမှာ တခြားပြက္ခဒိန်တွေမှာတောင်မတွေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရနေ့စွဲလေးတွေကိုပါ တွေ့နိုင်ပါတယ်...
(Scribd မှာ download လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်နော်...)
၂၀၁၀မှာ အားလုံးပဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ...
2010 English Myanmar Calendar Poems
Labels: ဟိုရေးဒီရေး ဖက်တီးလေး
Gmail message လေးတွေကို ဘာသာပြန်ချင်ရင်...
Posted by ဖက်တီးလေး at 8:27 PM
ဘလော့ဂ်လေးကို ပစ်ထားမိတာ တော်တော်လေးတောင် ကြာသွားပြီနော်..
စာသာမရေးဖြစ်တာ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေးကို ဘယ်သူတွေလာလည်လည်းဆိုတာတော့ ခဏခဏ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..
ရှားရှားပါးပါး လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေကိုလည်း ပို့စ်အသစ်မရှိတဲ့အတွက် အရမ်းအားနာပါတယ်...
အခု Gmail ရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Translate Message ဆိုတာလေး ပြောပြချင်လို့ပါ..
တစ်ချို့တွေလည်း သိပြီးသား/သုံးနေပြီးသား ဖြစ်မှာပါ...
အဲဒါလေးက မဆိုးဘူး.. တော်တော်အသုံးဝင်တယ်..
ဒီမှာက ဆရာ့ဆီကဖြစ်ဖြစ်.. တခြား lab ထဲကလူတွေက email ပို့ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်လိုပဲပို့ကြတာ..
ကိုယ်ကလည်း အခုအချိန်ထိ တစ်လုံးမှကို နားမလည်တာ..
အဲဒီတော့ translate လုပ်ဖို့ အရင်ကဆို အဲဒီစာတွေကို တခြား translator တစ်ခုခုကိုသုံးပြီး ဘာသာပြန်နေရတော့ နဲနဲအလုပ်ရှုပ်တာပေါ့..
အခုတော့ ဒီ feature လေးကြောင့် အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်လို့ ရသွားပြီ..
တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Gmail ရဲ့ Setting ကို click လုပ်ပါ..
နောက် Labs tab ရဲ့ အောက်က Message Translation ဆိုတာလေးကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Enable လုပ်လိုက်ပါ..
အဲဒါဆို Inbox ထဲက mail တွေကို ဖွင့်တိုင်းမှာ message ရဲ့အပေါ်နားမှာ အခုလိုမြင်ရမှာပါ..
ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ language (eg. Japanese to english) ကိုရွေးပြီး translate message ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ mail message တစ်ခုလုံးကို ဘာသာပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့...
Posted by ဖက်တီးလေး at 9:41 PM
ဘာလိုလိုနဲ့ ဖက်တီးလေးတောင် တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပဲ...
Labels: သီချင်းလေးတွေ..., အမှတ်တရ နေ့စွဲလေးများ...
Posted by ဖက်တီးလေး at 7:45 PM
ပုံ့ပုံ့ ကဟာသလေးတွေတင်ပါဦးလို့ ပြောတာရယ်... နောက်ပြီး ဒီနေ့ဖတ်ဖြစ်တဲ့ “ဆရာ မင်းလူ” ရဲ့ “ကျမ်းကိုးစာရင်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးထဲက စာသားလေးတွေကို သဘောကျမိတာရယ်ကြောင့် အဲဒီထဲက စာလေးတွေကို သူငယ်ချင်းအားလုံးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
ယုတ္တိဗေဒသမားတစ်ယောက်သည် ဘတ်စ်ကားစောင့်နေ၏။ သူစီးရမည့် အမှတ်(၄၈)ဘတ်စ်ကားသည် အချိန်အတော်ကြာအောင် ရောက်မလာခဲ့။ ထိုအခါ သူသည် မှတ်တိုင်သို့ ဆိုက်လာသော အမှတ်(၄၇)ကားကို တက်စီးလိုက်၏။ လမ်းဆုံမှာဆင်းပြီး အမှတ်(၁) ကားကို ပြောင်းစီးလိုက်သည်။ “(၄၇) နှင့် (၁) နဲ့ပေါင်းတော့ (၄၈) ဖြစ်သွားတာပေါ့..” ဟု သူကသတ်မှတ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူသည် သွားလိုရာခရီးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်သို့ရောက်သွားလေသည်။
စာပေသမားတစ်ယောက်သည် ကားတစ်စီးငှားပြီး ခရီးထွက်လာခဲ့သည်။ ထမင်းစားချိန်ရောက်သောအခါ မြို့ငယ်တစ်မြို့ရှိ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာ ကားရပ်လိုက်ပြီး ဒရိုင်ဘာက “ထမင်းစားကြရအောင် ဆရာ..ဒီဆိုင်ကဟင်းတွေ သိပ်ကောင်းတယ်...” ဟုပြောသည်။ စာပေသမားက ဆိုင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးခေါင်းခါလိုက်သည်။ “ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်စမ်း..ထမင်းဆိုတဲ့စာလုံးကို “ထဆင်ထူး”နဲ့ “မ” ကို နှစ်လုံးဆင့်ရေးထားတယ်။ သတ်ပုံမှားနေတယ်။” ဟု မနှစ်မြို့ဟန်ဖြင့်ပြောသည်။ ထိုအခါ ဒရိုင်ဘာက “ဆရာက ထမင်းစားမှာလား.. သတ်ပုံစားမှာလား..”ဟုပြန်မေးလိုက်လေသည်။
ပညာရှိကြီးက စာအုပ်ပုံကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး “ဟောဒီ စာအုပ်တွေဟာ ငါ့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေပဲ။ ” ဟုဆို၏။ “အဲဒီ အတွေးအခေါ်တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် အချိန် (၁၀)လောက်တော့ ရှိမယ်နော်.. ဆရာကြီး” ဟု ဘော်တယ်ကုလားက ပြန်ပြောလိုက်၏။
သစ်ပင်အရိပ်ကောင်းကောင်းအောက်မှာ ထိုင်ရင်းငေးမောနေသော အလုပ်လက်မဲ့တစ်ယောက်နားသို့ ဘောဂဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက် ရောက်ရှိလာ၏။ သူက “မင်း အလုပ်တစ်ခုခုကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်သင့်တယ်။ ဒါမှ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဇိမ်နဲ့နေနိုင်မှာပေါ့။”ဟု အကြံပေးညွှန်ကြားသည်။ ထိုအခါ အလုပ်လက်မဲ့က ပြန်ပြော၏။ “ဒါဆို ဘာလုပ်နေစရာလိုတော့လို့လဲဗျာ။ အခုလဲ ကျွန်တော် ဇိမ်နဲ့ထိုင်နေတာပဲ။” ဟု ပြန်ပြောလိုက်၏။
သင်္ချာသမားတစ်ယောက်သည် အပြင်သွားခါနီးတွင် သတင်းစာထဲက မိုးလေ၀သ သတင်းကို ဖတ်ကြည့်သည်။ “ယနေ့ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၅၀)” ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် မိုးကာအင်္ကျီဝတ်ပြီး နေကာမျက်မှန်တပ်လျက် ထွက်သွားလေသည်။
“ယောက်ျားတွေ အမှားကြီးမှားပြီဆိုရင် အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ်” ဟု ရှေ့နေတစ်ယောက်က ပြောသောအခါ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က “မိန်းမတွေ အမှားကြီးမှားပြီဆိုရင် အသက်တစ်ချောင်းကို မွေးထုတ်ပေးရတတ်တယ်ဗျ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်။
သူငယ်ချင်းအားလုံး ပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့...
Labels: ဖတ်မိဖတ်ရာ တိုတိုထွာထွာ, ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ
Posted by ဖက်တီးလေး at 10:48 PM
အခုတလော ဘာတွေနဲ့ရှုပ်နေမှန်းကို မသိဘူး...
ဘလော့ဂ်လေးမှာ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်တာ တော်တော်လေးတောင် ကြာသွားပြီ...
ရှားရှားပါးပါး လာလည်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အရမ်းကို အားနာမိပါတယ်...
ဒါကြောင့် အပျင်းပြေ ဆော့လို့ရတဲ့ web site လေးတစ်ခုကို ပြောပြမယ်နော်... :)
လူတိုင်းမှာ ဆံပင်ပုံစံက တော်တော်အရေးပါတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ...
တစ်ခါတစ်လေ သူများညှပ်ထားတာမြင်လို့ ကိုယ်နဲ့လိုက်မလားထင်ပြီး ညှပ်လိုက်မိကာမှ တော်တော်လေး ကြည့်ရဆိုးသွားတာ မျိုးတွေလဲ တွေ့ဖူးတယ်...
တစ်ချို့နာမည်ကြီးတဲ့ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်ပုံလေးတွေကို computer effect သုံးပြီး အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြည့်ပေးပြီးမှ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်(ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့)ပုံလေးတွေ ညှပ်ပေးတယ်လို့ ကြားဖူးတာပဲ...
ဒါပေမယ့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တိုင်းတော့ အဲလိုလုပ်မပေးနိုင်သေးဘူး ထင်တယ်နော်...
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စမ်းမကြည့်ချင်ကြဘူးလားဟင်...
အဲလို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီlink လေးကနေတဆင့် စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်နော်...
ဖက်တီးလေးတော့ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံနဲ့ မိတ်ကပ်၊ ဆံပင် ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်နေတာ တော်တော်ရီရတယ်.. ပျော်စရာလဲကောင်းတယ်...
အားလုံးပဲ မိမိနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကို ရှာဖွေရင်း ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့...
Don't Leave Home- Dido
Posted by ဖက်တီးလေး at 8:12 AM
Posted by ဖက်တီးလေး at 3:09 AM
ဒီနေ့က “အဖြူရောင်သံစဉ်” ရေဒီယို ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့တဲ့...
အခုတလော ဒီသီချင်းလေးကို ခဏခဏ နားထောင်ဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ အမှတ်တရ တင်လိုက်တာ...
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ သီချင်းတွေသိပ်နားမထောင်ဖူးပေမယ့် ဒီသီချင်းလေးကတော့ သူ့အသံအေးအေးလေးနဲ့လိုက်သလိုပဲ...
“ အသိစိတ်ကထိန်းချုပ်လည်း မသိစိတ်ကသတိရနေ... ငါကိုယ်တိုင်တောင် နားမလည်တော့ဘူး...”
inbox ကတစ်ချို့ mail တွေကို Mute လုပ်ချင်ရင်..
Posted by ဖက်တီးလေး at 2:56 PM
ဒါကတော့ Gmail ရဲ့ နောက်ထပ် feature လေးတစ်ခုပါ..
တစ်ခါတစ်ခါ..ကိုယ်က mailing list တစ်ခုခုကို subscribe လုပ်ထားမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်... ကိုယ်နဲ့သိပ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့ အပြန်အလှန်ပို့နေကြတဲ့ mail conversation တစ်ခုခုမှာပါနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..ကိုယ့်ရဲ့ inbox ထဲမှာ ကိုယ်မဖတ်ချင်တဲ့ email တွေရောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်...
အဲလို email မျိုးတွေကို ဒီ Mute feature လေးကိုသုံးပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်...
ပထမဆုံး ကိုယ် Mute လုပ်ချင်တဲ့ email ကို select (check) လုပ်ပြီး "More actions" ကို click လုပ်လိုက်ပါ..
နောက်..ပုံမှာပြထားသလိုပဲ..အဲဒီ drop-down list ကနေ Mute ကို ရွေးလိုက်ပါ...
နောက်ဆို..ကိုယ့်ရဲ့ inbox မှာအဲလို email မျိုးထပ်မရောက်လာနိုင်တော့ပါဘူး...
မှတ်ချက်။ ။ “To” ဒါမှမဟုတ် “cc” မှာ ကိုယ့်ရဲ့ email address ပါတဲ့ mail မျိုးတွေကတော့ Mute ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ email တွေရောက်မလာမှာမျိုး စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး...
နောက်တစ်ခါ..အဲဒီ Mute လုပ်ထားတဲ့ email တွေကို ပြန်ရှာချင်ရင် gmail search box မှာ “is:muted” လို့ရိုက်ထည့်ပြီး “search mail” button ကို click လုပ်ကြည့်ပါ...
Muted mails တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ပြန်ပြီး unmute လုပ်ချင်ရင် အဲဒီ email ကို select လုပ်ပြီး “Move to Inbox” ကို click လုပ်လိုက်ပါ...
Inbox မှာ အဲဒီ mail တွေပြန်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်...
Posted by ဖက်တီးလေး at 12:05 AM
ဒီနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ တစ်ခုခုရေးဖို့ ဘာရေးရမှန်းစဉ်းစားလို့မရဘူး...
နောက်မှ အခုလောလောဆယ်ကောက်ရထားတဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်လေးပို့ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ ပို့စ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးရသွားတယ်..
တစ်ရက်... ကိုယ့်ရဲ့ cbox ထဲမှာ “လာလည်ပါတယ်... ဝကစ်လေး... Link လုပ်ပေးထားပါတယ်...” ဆိုတဲ့ msg လေးကစလို့ ဒီနေရာလေးကို ရောက်သွားခဲ့တယ်...
အဲဒီမှာပဲ ပန်းချီပုံလေးတွေကိုမြင်တော့...အရမ်းသဘောကျတာနဲ့ comment လေးတွေရေးခဲ့မိတယ်..
နောက်တစ်နေ့ ကိုယ့်ရဲ့ cbox မှာ “မမဝကစ်ရဲ့ပုံ သားဆွဲကြည့်ပေးမယ်လေ...” ဆိုတဲ့ msg လေးထပ်ရောက်လာတယ်...
ဒါနဲ့ နောက်တစ်ခေါက် သူ့ဘလော့ဂ်လေးကို အလည်ထပ်ရောက်တော့ “ပုံဆွဲပေးမယ်ဆို..ဆွဲပေးလေ...” လို့ ရေးခဲ့တော့..
နောက်နေ့..“ဟိတ် ဝကစ်.. Request လုပ်ထားတယ်ဟုတ်? သားငယ်ကိုဖုန်းဆက်ထားသေးလား မသိဘူး.. ;p” ဆိုပြီး ကိုယ့် cbox မှာ လာရေးသွားပြန်ရော...
ကိုယ်လည်း ဖုန်းမဆက်ထားဘူးဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့မှားနေတာများလားဆိုပြီးး.. သူ့ဘလော့ဂ်လေးကို ထပ်ရောက်သွားခဲ့ပြန်တယ်...
အဲဒီမှာပဲ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်မိပြီး ရီလိုက်ရတာ...
စစဖတ်ခြင်းတုန်းကတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး..ပုံလေးတွေကိုမြင်တော့မှ နားလည်သွားတာ..
နောက်ပြီး...ကိုယ်တိုင်သာမဆွဲတတ်တာ...ကိုယ်က ပန်းချီပုံလေးတွေဆို အရမ်းသဘောကျတယ်...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက် ဒီပုံလေးတွေက အမှတ်တရပါပဲ...
ခင်မင်တာ သိပ်မကြာသေးပေမယ့် အခုလိုချက်ချင်းပုံဆွဲပေးခဲ့တာဆိုတော့ အရမ်းကို သဘောကောင်းတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်မှာပဲနော်...
(ကိုယ့်ကိုပုံဆွဲပေးထားတာ..ဒီလောက်တော့ မြှောက်ထားရမှာပေါ့...:P )
တကယ်လို့ သဘောကျလို့ ပုံတူဆွဲဖို့ အပ်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ သွားရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်..
အခန့်မသင့်ရင်တော့.. သူကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းရေး..သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ထားတဲ့ ပေါက်ကရဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ ပါသွားနိုင်တာပေါ့လေ...
ပုံလေးတွေကို ကြိုတင်ခွင့်မတောင်းပဲယူသုံးမိတာ စိတ်မဆိုးလောက်ပါဘူးနော်...သားငယ်... :P
ps. ကိုယ့်နာမည်က “ဖက်တီးလေး” ပါပဲ..“၀ကစ်” ဆိုတာ သူ့ဟာသူ ဘယ်လိုကဘယ်လို စိတ်ကူးရလို့ခေါ်နေတယ် မသိဘူး.. :P
အားလုံးပဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ..ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့...
Posted by ဖက်တီးလေး at 1:47 PM
လူတွေဟာ တချို့အရာတွေရဲ့တန်ဖိုးကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိနေတုန်းမှာ သတိမပြုမိကြပဲ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်ကျမှ သတိပြုမိတတ်ကြတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်သ လိုပဲနော်....
ဥပမာ... ကျန်းမာခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို မကျန်းမာတဲ့အချိန်ကျမှ သတိပြု...တန်ဖိုးထားမိလာတတ်ကြသလိုပဲပေါ့...
ကိုယ်တို့အိမ်မှာ နေ့တိုင်းဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးရှိတယ်....
အဲဒီဘုန်းဘုန်းက သူ့ကိုသီးသန့်ပင့်ဖိတ်ပြီး ဆွမ်းကပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်စေ...
ဆွမ်းခံကြွရင်း ဘောဇဉ်ခဲဖွယ်တစ်ခုခုကို အိမ်မှာတင် ဘုန်းပေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်စေ...
ပုံမှန်နေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းတာအတွက်တော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ဆုမပေးပါဘူး... သာဓုခေါ်ရုံလောက်ပါပဲ...
(နေ့စဉ် အိမ်တိုင်းသာ ဆုရှည်ရှည်ပေးနေရရင်လည်း ဘုန်းဘုန်း အမောဆို့ နိုင်တယ်... :P )
အဲဒီဆုကတော့ “အိပ်မက်ယာမက် ကောင်းစွာမက်၍ နှစ်သက်ကြီးစွာ အိပ်စက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း...” တဲ့...
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲဒီတုန်းကတော့ ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ အပူအပင်မရှိ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ အဲဒီဆုကို သိပ်ပြီး သဘောမကျဘူး...
ဘုန်းဘုန်းကလည်း ဘာလို့များတစ်ခြားဆုတွေ မပေးပါလိမ့်ပေါ့...
ဒါပေမယ့်လည်း ဘုန်းကြီးကို တစ်ခြားဆုပြောင်းပေးပါလို့လဲ ပြောလို့ကမဖြစ်တော့ “ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ...” ပေါ့လေ...
အခုအချိန်မှာတော့ တကယ့်ကို ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်နဲ့ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်...
“အိပ်မက်ယာမက် ကောင်းစွာမက်၍ နှစ်သက်ကြီးစွာ အိပ်စက်နိုင်ပါစေ...” လို့..
(ဖြစ်နိုင်ရင် အိပ်မက်တောင် မမက်ချင်ပါဘူးလေ...)
အားလုံးပဲ အိပ်မက်ယာမက် ကောင်းစွာမက်၍ နှစ်သက်ကြီးစွာ အိပ်စက်နိုင်ကြပါစေ...လို့...
Don't Touch My Computer ...
Posted by ဖက်တီးလေး at 8:17 PM
ဒါလေးကတော့ Free Screen Saver လေးပါ...
Don't Touch My Computer တဲ့...
လိုချင်ရင် ဒီနေရာမှာ download လုပ်ယူပါနော်...
exe ဖိုင်ကို double-click လုပ်ပြီး install လုပ်ရုံပါပဲ...
setting ပြောင်းချင်ရင်တော့ တစ်ခြား screen saver တွေလိုပဲ desktop ပေါ်မှာ right-click လုပ်ပြီး Properties ထဲမှာ သွားပြင်လို့ရပါတယ်...
Posted by ဖက်တီးလေး at 3:53 PM
Embeded Flash & Video Files လေးတွေကို download လုပ်ချင်ရင်...
Posted by ဖက်တီးလေး at 12:31 AM
အခုပြောပြမယ့် freeware လေးကတော့ web page တွေမှာ embed လုပ်ထားတဲ့ Flash files လေးတွေ၊ Video files လေးတွေနဲ့ Music files လေးတွေကို download လုပ်ယူနိုင်မယ့် software လေးပါ...
တစ်ခါတစ်လေ... internet မှာလျှောက်ကြည့်ရင်း ကိုယ်က အဲဒီ files လေးကိုလိုချင်..ဒါပေမယ့် download ကပေးမထားနဲ့ ကြုံဖူးကြမှာပါ..
အဲဒီအခါမျိုးမှာ ဒီ Orbit downloader လေးက တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်...
သုံးကြည့်ချင်ရင် ပထမဆုံး ဒီနေရာမှာ download လုပ်ယူပြီး install လုပ်လိုက်ပါ...
နောက်ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ files ကို catch လုပ်ဖို့ grab++ ကို On ပေးဖို့လိုပါတယ်..
(Installation Setting မှာ Run At Startup လုပ်ထားရင်တော့ အမြဲတမ်း On ပေးစရာမလိုပါဘူး...)
ပုံမှာပြထားသလို Tool-> Grab++ ကို click လုပ်လိုက်ပါ...
ဒါဆိုရင် Grab++ မှာသူ catch လုပ်ထားတဲ့ files တွေကို အခုလိုတွေ့ရမှာပါ...
(တကယ်လို့ ကိုယ်ရချင်တဲ့ file ကိုမတွေ့ရဘူးဆိုရင် အဲဒီ webpage ကို refresh လုပ်ပေးလိုက်ပါ...)
ကိုယ်ရချင်တဲ့ file type ပေါ်မူတည်ပြီး display မှာရွေးကြည့်လို့ရပါတယ်...
ဒါက Flash(swf) files လေးတွေပါ...
ဒါက Music files လေးတွေပါ..
(သူက Music နဲ့ Video files တွေကို flv files အနေနဲ့ပဲ save လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်....
နောက်မှ အဲဒီ flv file ကနေ တခြား file type တွေကို ပြောင်းနည်းရေးပေးပါမယ်...)
အဲဒီမှာ...ကိုယ်လိုချင်တဲ့ files ကို select မှတ်ပြီး download ကို click လိုက်ရုံပါပဲ...
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်လေးများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...
Flash သီချင်းလေးတွေ... (6)
freewareလေးတွေ သုံးရအောင် (31)
Gmail/Gtalk ကနေ... (17)
iPhone Diary (4)
ကဗျာ အပိုင်းအစလေးများ (4)
ဖတ်မိဖတ်ရာ တိုတိုထွာထွာ (10)
ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ (7)
ပြီးလွယ်စီးလွယ် ဟင်းချက်မယ် (4)
ရှာရှာဖွေဖွေ ကစားကြမယ် (1)
ဟိုရေးဒီရေး ဖက်တီးလေး (11)
အမှတ်တရ နေ့စွဲလေးများ... (9)
Sun Ray Pride
Myanmar MP3 Albumn
အလည်လာတဲ့သူအားလုံး ပေးလိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်လေးတွေအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်စုံတစ်ရာပြန်ပေးနိုင်အောင် ထာဝရကြိုးစားသွားမှာပါ။